WebcamMax 7.5.4.2 Multilingual ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Desktop Fun » WebcamMax 7.5.4.2 Multilingual
By နေမင်းမောင်8:50 PM3 comments
ကျွန်တော်အခု CoolwareMax WebcamMax လေးတစ်ခုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။အသုံးပြုနေ တဲ့သူတွေဆို ရင်တော့ သိကြမှာပါ။ Animation လေးတွေနဲ့ Effects လေးတွေတော်တော် များများကိုစုံပါတယ်။ဒီကောင်လေးက Webcams Programs တွေဖြစ်တဲ့ ICQ, AIM, MSN, Camfrog, Skype, Paltalk, Yahoo, ANYwebcam, Stickam အစရှိတဲ့ Programs လေးတွေကို Support လုပ်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Webcam ပေါ်မှာ Floating text, Frame effects,Transform effects,Emotion effects စတဲ့ Effects လေးတွေကို ထည့်သွင်းပေးနိုင်ရုံမျှမက Webcam effects လေးတွေကိုလည်း အပတ်တိုင်း update လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Programs 16 ခုကိုလည်း Share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ Animation တွေနဲ့ Effects လေးတွေလည်းတော်တော်များများ ပါဝင်ပါသေးတယ်။ အောက်မှာ ကျွန်တော် Patchဖိုင်နဲ့ Keygen ကို ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ ဆိုတာကို ပုံလေးနဲ့ပြပေးထား ပါတယ်။နည်းနည်းတော့ရှုပ်ပါတယ်။ အခုနောက်ထွက်လာတဲ့ Update လေးပါ။
အခုအရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းလေးတွေကို ပုံလေးတွေနဲ့ပြပေး သွားပါ့မယ်။ အရင်ဆုံး Patch ဖိုင်လေးကို Install လုပ် ထားတဲ့ Folder လေး ထဲကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ကူးပြီးတာနဲ့ Patch ဖိုင်လေးကို RUN ပေးလိုက်ပါ။
Can not access ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မရဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။
အားလုံးပြီးရင်တော့ Activated ဖြစ်သွားပါပြီ။နည်းနည်းလည်းရှည်သွားပါတယ်။သည်းခံပြီးဖတ်ပေးတဲ့ အ တွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 27.81 MB ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ် နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ ပုံတွေကိုမမြင်ရဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်အောက်မှာ PDF ဖိုင်လေးနဲ့ထပ် ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နက်မကောင်းလို့ Multiupload မှာပဲရွေးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ယူရတာလည်း လွယ်ကူအောင်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
i can't open keygen. Can u please check it again.
Thanks million bro
phone win December 10, 2011 at 2:21 PM
ချစ် သူ June 11, 2012 at 9:24 AM